Kuyera, Wongororo uye Mutengi Chinangwa | Martech Zone
China, May 5, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rapfuura, ndakave nemufaro wekusangana nekutaura na Jeff Quipp YeKutsvaga Injini Vanhu, iyo SEO uye Internet Kushambadzira yakasimba. Jeff akagadzirisa pani pane ratings, ongororo uye midhiya enhau andaive ndiri pa Tsvaga Kushambadzira Expo uye eMetrics Musangano muToronto ne Gil Reich, VP yeChigadzirwa Management pa Mhinduro.com.
Jeff akaunza kiyi imwe - chinangwa chemushanyi, chimwe chinhu chatinogara tichiedza kunzwisisa sezvo isu tichishanda pamwe nevatengi kukwidziridza yavo saiti yekutsvaga nekutendeuka. Jeff akaparadzanisa zvikamu zviviri kuita inofungidzirwa uye tsvina vatengi uye vakakurukura nezve simba rezviyero uye ongororo. Ongororo dzisina kunaka dzakakanganisa maitiro ekutenga. Jeff akataura nezve chidzidzo cheLightspeed Research muna 2011:
62% yevatengi verenga ongororo pamhepo pamberi kutenga.
62% yevatengi vakaongororwa vakavimbika mwe maonero evatengi.
58% yevatengi vakaongorora maonero akavimbika kubva kuvanhu ivo aiziva.
21% yevatengi vakaongororwa vakati 2 kuongororwa kwakaipa shanduka pfungwa dzavo.
37% yevatengi vakaongororwa vakati 3 kuongororwa kwakaipa shanduka pfungwa dzavo.
Chete 7% yevatengi vakatendeukira kumasocial network avo kuti vaongorore, vamwe vese vakatendeukira kumasaiti ekuenzanisa uye kutsvaka injini.
Unogona kufunga nezviyero uye ongororo sepeji chero ine nyeredzi uye dzimwe mhinduro dzisingazivikanwe kubva kuvashandisi… asi Jeff akadenha vateereri kuti vafunge kupfuura izvozvo:
Youtube zvinongedzo, zvido uye makomendi anokanganisa maseru evhidhiyo.
Yemunharaunda bhizinesi mhedzisiro mune dzekutsvaga injiniBing, Google) vane wongororo dzakabatana. Kuwanda kweongororo, kudzokorora uye kuwanda kweongororo kunogona kukanganisa kubaya-kuburikidza nemitengo. Majini ekutsvaga anokweverawo mukati mamakero uye ongororo kubva kune mamwe mapato echitatu-bato saiti saYelp.
Google's yakasarudzika yekutsvaga inoita kuti ubvise saiti kubva pane zvekutsvaga. Izvi zvinokanganisa chinzvimbo chesaiti kana vanhu vazhinji vachizviisa pasi? Pamwe.
Kuyera uye wongororo hazvisi zvese zvinokanganisa uye kusviba kumakambani anotarisana nemhinduro dzakaipa online. 33% yeavo vakagamuchira mhinduro kubva kukambani nekuda kwekutarisa kwakashata yakatumira wongororo yakanaka. 34% yakabvisa yavo yakaipa ongororo zvachose!
Mharidzo yaJeff yaive yakazara - kutaura nezvekushandisa nharembozha pamwe nematanho eGoogle ekusanganisira nhaurirano yemagariro enhau zvakananga mumhedzisiro yekutsvaga. Chidzidzo mune aya manhamba, ehe, ndechekuti uve nechokwadi chekuti urikushanda kusimudzira makambani ako online. Kumbira vatengi vako kuti vape ongororo uye uvaratidze maitiro ekuzviendesa. Pindura uye gadzirisa zvinhu zvakakonzera kuongororwa zvisina kunaka kuitira kuti iwe ugone kudzoreredza iwo mamiriro.
Kushaikwa kweongororo uye kuongororwa kwakashata kunogona kushandura anotarisira mutengi kutenderera. Tarisa kupfuura yako saiti uye wongorora mukurumbira wako pane ratings uye ongorora saiti. Izvo zvinokanganisa maitiro ekutenga.
Tags: 2011answers.commutengi chinangwagil reichjeff quippmagetsi ekuongororaratingsratings uye wongororoReviews
Pasina Zvishandiso Zvakakodzera…
Nguva pfupi yadarika ndakagamuchira email kubva kubhizimusi rekugadzirisa motokari randinoshandisa. Diki, bhizinesi renzvimbo rimwechete iro richangotanga kushandisa online kushambadzira. Vanopa $ 10 coupon kune ramangwana kugadzirisa kana ndikatumira wongororo nezve yangu ichangoburwa sevhisi basa navo. Chikumbiro chacho chaive chakakodzera nguva, chakasvika pakupera kwevhiki mushure mekushanya kwesevhisi. Yakanga iri nguva imwe chete yekupihwa, uye ndakafunga nzira yakanaka yekundiendesa kune yavo saiti.